TỌGHARỊA NWANNA MBIPỤTA TONER COUNTER - ONYE NBIPUTA - 2019
Onye ọrụ nkịtị kwesịrị ịbanye na BIOS nanị maka ịtọ ntọala ọ bụla ma ọ bụ ntọala PC ndị ọzọ. Ọbụna na ngwaọrụ abụọ site n'aka otu onye ahụ, usoro nke ịbanye BIOS nwere ike ịdị iche iche, ebe ọ bụ na ihe ndị dị ka laptọọpụ, ụdị ntanetị, na nhazi motherboard na-emetụta ya.
Anyị tinye BIOS na Samsung
Ihe kachasị na-eme ka ị banye BIOS na Samsung laptọọpụ bụ F2, F8, F12, Hichapụna nchịkọta kachasị ọnụ Fn + f2, Ctrl + F2, Fn + f8.
Nke a bụ ndepụta nke ndị kasị ewu ewu na larịị na ụdị nke laptọọpụ Samsung na igodo ịbanye BIOS maka ha:
RV513. Na nhazi nke gara aga ka ị gaa BIOS mgbe ị buuru kọmputa mkpa ijide F2. Ọzọkwa na ụfọdụ mgbanwe nke ihe nlereanya kama F2 nwere ike iji Hichapụ;
NP300. Nke a bụ laptọọpụ kachasị ọsọ sitere na Samsung, nke gụnyere ọtụtụ ụdị yiri ya. N'ọtụtụ n'ime ha, isi bụ maka BIOS. F2. Nanị otu bụ NP300V5AH, dị ka a na-eji abanye F10;
ATIV Book. Usoro ihe omume nke laptọọpụ a gụnyere naanị 3 ụdị. Na ATIV Book 9 Spin ma ATIV Book 9 Pro eji BIOS abanye F2na na ATIV Book 4 450R5E-X07 - iji F8.
NP900X3E. Ihe nlereanya a na-eji otu ihe dị mkpa Fn + f12.
Ọ bụrụ na ngwà laptọọpụ gị ma ọ bụ nsonye nke ọ bụ, adịghị edepụtara, mgbe ahụ, a ga-achọta ozi banyere ọnụ ụzọ na ntuziaka onye ọrụ nke na-abịa na laptọọpụ mgbe a zụrụ ya. Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịchọta akwụkwọ ahụ, mgbe ahụ, a ga-ahụ ya na kọmputa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti rụrụ. Iji mee nke a, jiri naanị ụlọ ọrụ nyocha - tinye aha zuru ezu nke laptọọpụ gị n'ebe ahụ nakwa na nsonaazụ ahụ chọta akwụkwọ nkwado.
Ị nwekwara ike iji "uzo", mana ọ na-ewekarị oge dị ukwuu, n'ihi na mgbe ị na-pịa igodo "na-ezighị ezi," kọmputa ahụ ka ga-ebuutu, n'oge OS kwara oge, ị gaghị anwale igodo niile na njikọta ha.
Mgbe ị na-ebudata laptọọpụ a na-atụ aro ka ị ṅaa ntị na mkpado ndị na-egosi na ihuenyo ahụ. Na ụdị ụfọdụ enwere ike ịchọta ozi na ọdịnaya ndị a "Pịa (igodo ịbanye BIOS) iji mee ka ntọala". Ọ bụrụ na ị hụrụ ozi a, wee pịa igodo ahụ edepụtara n'ebe ahụ, ị ​​nwere ike tinye BIOS.